BOOLISKA TOGDHEER OO GACANTA KU SOO DHIGAY DABLEY DIL KA GEYSTAY HAWDKA BURCO | Gaaroodi News
Badhasaabka gobolka Togdheer, Maxamed Ibraahim Qabo, ayaa caddeeyay in la soo qabtay afar nin oo habeen hore dil ka geystay meesha la yidhaahdo Gondor-ka oo qiyaastii 8KM oo dhinaca koonfureed ah kaga beegan magaaladda Burco.Nimankaasi oo kadib markii ay dilka gaysteen u baxsaday degaanka buuralayda ah ee Sil-siladda Gollis, halkaasi oo ay ku dhuumanayeen ayaa xalay ciidamada boolisku gacanta ku soo dhigeen, iyadoo la soo gaadhsiiyay magaaladda Burco.
Sida uu sheegay badhasaabka gobolka Togdheer Maxamed Ibraahim Qabo, oo xalay telefoonka aan kula xidhiidhnay isagoo joogay Burco. Waxaanu badhasaabku ka war bixiyay sida uu dilkaasi u dhacay iyo dhaco kale oo ka dambaysay oo nin ka soo jeedda beesha nimanka wax dilay oo ay isna af-duubteen Ragg ka soo jeedda beesha ninka laga dilay.
badhasaab Qabo waxa uu sheegay in kadib markii waan-waan laga galay arrintaasi ay ku guulaysteen in ay soo daayeen ninkii af-duubka loo haystay, laguna wareejiyay odayaasha beeshiisa isagoo nabad qaba. Badhasaabka ayaa intaasi ku daray in sidoo kale xalay magaaladda Burco la soo gaadhsiiyay afartii nin ee dilka gaystay oo ay ciidamadda boolisku gacanta ku soo dhigeen.
“Waxaa jiray dil habeenkii Sabtidu soo gelaysay ka dhacay meel Burco koonfurta ka xigta oo 8KM u jirta, oo Gondorka la yidhaahdo. Afartii nin ee dilka gaystay gacanta ayaa lagu soo dhigay, caawa ayaa la soo qabtay oo Burco la keenay, buuralayda sil-silada Gollis ayay galeen meel meesha la yidhaahdo Geba-gebo. Qoladii ninka dishay ee baxsaday-na maanta ayay isku soo dhiibeen odayaashooda iyo ciidanka booliska, Burco ayaanay ku xidhan yihiin,”ayuu yidhi Badhasaabku, waxaanu intaas ku daray “Ninkan la af-duubtayna wuxuu ahaa qolodii ninka laga dilay ayaa iyaguna nin af-duubay, markaa anaga ayaa ku baxnay waananu soo qabanay, saaka (shalay subax) odayaashii beeshiisa ayaanu ku wareejinay. Qoladan af-duubka gaystay waxay ninka u af-duubteen markii nimankii dilka gaystay la waayay ee ay baxsadeen. Taliyaha qaybta ayaa laba habeen meesha joogay, markaa imika ayaa lagu soo guulaystay.”
Badhasaabka oo faahfaahin ka bixinayay sababta keentay dilka ninkaasi, waxa uu yidhi”Dilkani waxa uu ka dhashay niman waddo sii lugaynayay, Dhaameel ayay u sideen xoolahadii ay ka gureen geedka Garan-waaga, ayaa nimankan kale oo baabuur Surf ah watay ay ka daba tegeen, waxay ku yidhaahdeen Tuug ayaad tihiin oo wax baad sidataan aad soo xadeen iyo ma sidano, kadib-na halkaas ayuu is-af-dhaafku ka yimid. Qoladda baabuurka Surf-ta ah wadatay ayaa qoryo sidatay, kadib-na Rasaas ayay ku fureen sidaas ayaanu ninku ku dhintay.”
Dhinaca kale, guddoomiyaha gobolka Togdheer, waxa uu beeniyay in dhacdadaasi ay wax xidhiidh ah la leedahay shaqaaqo hore u dhex martay laba beelood oo ka dhacday degaanka Baliga Diiriye Guuleed oo dhinaca woqooyiga ka xigga Burco.Isagoo arrintaasi ka jawaabayay-na waxa uu yidhi “Maya, wax xidhiidh ah lama laha arrintii baliga Diiriye Guuleed, labadda beelood ayuun baa ah beelihii hore muranku ugu dhexmaray baliga Diiriye, laakiin ma aha arrin la xidhiidha taasi. Waana arrin ka duwan oo ku dhacday si lama filaan ah, loomana Sibir-saari karro arrintii baliga Diiriye Guuleed.Meesha ay wax ka dhaceena ma aha dhinaca baliga Diiriye. Wuxuu falku ka dhacday hawdka ama koonfurta Burco, baliga Diiriye-na woqooyiga ayuu ka xigaa Burco.” Ugu dambayn badhasaabka Togdheer waxa uu sheegay in ay rejaynayaan in arrintaasi ay sidaas ku dhamaato, isla markaana dhibaato kale aanay dhici doonin.